Uyiphucula njani i-wifi signal ekhaya ngaphandle kokuchitha imali | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | ngokubanzi, Ikhaya
Namhlanje sikuzisa iposti enokukwenza phucula ukusebenza komqondiso wifi yasekhaya. Indlela yethu yemihla ngemihla idityaniswe kwi-intanethi ukusukela kwixesha lokuvuka kwethu de sayokulala. Oku kunjalo, nokuba sifuna ukuyibona okanye akunjalo. Y Ukuba nesiginali elungileyo ye-Wi-Fi ekhaya kuya kusinceda sigcine imood elungileyo.
Enye yezona zinto zixhaphakileyo kubomi bethu bemihla ngemihla zibangelwa kukusilela konxibelelwano lwe-Intanethi. Nokuba usemsebenzini, ekhaya ubukele imovie okanye unxibelelana nothungelwano lwe-smartphone, ukusilela kwe-wifi kuyafana nomsindo. Namhlanje siza kukunika ezinye iingcebiso ezilula ukuze unxibelelwano lwakho lweWi-Fi luphucule kakhulu. Ingaba unomdla?
1 Ukuphucula i-Wi-Fi yakho yasekhaya ngokulula kwaye simahla
2 Guqula umzila wendawo
3 Guqula iphasiwedi ye-wifi yethu
4 Guqula ishaneli yeWi-Fi esiyisebenzisayo i-router yethu
5 Unxibelelwano olunentambo
6 Sebenzisa i-router endala
Ukuphucula i-Wi-Fi yakho yasekhaya ngokulula kwaye simahla
Kukho kwimarike Ubuncinci beemveliso ezinxulumene nokunxibelelana okuyilelwe ukusinika ukwanda komqondiso. Izixhobo ezisebenza ngokufanelekileyo, Phinda okanye uphinde uphawu lwethu lwe-wifi Ukuze ifikelele kwikona nganye yekhaya lethu. Isisombululo esisebenza ngokubanzi kwaye sisenza ukuba sifumane ukugubungela iWi-Fi ekhaya.
Esinye sezizathu zokuba umqondiso wethu ungahambi kakuhle kunokuba kwizixhobo ngokwazo. Abanalo unxibelelwano olusebenzayo ngokulinganayo umzila wangoku kunomnye oneminyaka eliqela. Eyethu ikhompyuter, okanye i-smartphone, Banokuba banokwamkelwa kancinci kwe-Wi-Fi, into enokuba nefuthe ekusebenzeni konxibelelwano lweWi-Fi.
Kodwa namhlanje sifuna ukuphakamisa ezinye iindlela zasimahla ezinokuba luncedo. Amanyathelo athile alula esinokuwenza ekhaya ukuze isignali yeWi-Fi ifikelele ngcono apho sifuna khona. Kungenzeka ukuba azikusebenzeli, okanye sele uzame, kodwa nazi iingcebiso zasimahla, nangona zibonakala zicacile, Unokwenza uphawu lwakho lwe-wifi lusebenze ngakumbi.
Guqula umzila wendawo
Ingabonakala isisiyatha kodwa Kubonakalisiwe ukuba indawo apho sibeka khona i-router ekhaya inokuchaphazela kakhulu umgangatho wesiginali ukuba samkele. Amaza oxhulumaniso lwe-Wi-Fi anokuthintelwa zizinto ezibonakalayo yendlu yethu. Ngelixa kuyinyani ukuba ii-routers kunye nee-eriyali zazo ziphuculwe ngokuhamba kwexesha.
Isiko lethu ukubeka i-router xa sisenza ufakelo kwindawo enye apho sinomnxeba wekhaya osisigxina. Kungenxa yokuba ngale ndlela yonke into idityaniswe ngendlela engumbindi kwaye elula. Kodwa ukuba ifowuni ayifumanekanga kakuhle, isisombululo sinokuvela singalunganga. Okwabo ukubeka i-router kwindawo engenazo izithintelo phambi kwayo ezifana neendonga, iikholamu, iishelfu, njl. Y ephezulu le, ngcono umqondiso ukukhupha.
Guqula iphasiwedi ye-wifi yethu
Eyona nto ikhuselekileyo yile ngazangekuba ufake umzila ekhaya, Ngaba utshintshe iphasiwedi? ukuba izisa kumzi-mveliso. Oku kuququzelela kakhulu ukufikelela kunxibelelwano lwakho kubo bonke abo bafuna ukuqhekeza iphasiwedi yomsebenzisi. Kuyaboniswa ukuba Kulula kakhulu "ukuqhaqha" igama eligqithisiweyo le-Wi-Fi apho iinkampani zisete ngokwakhona, kunezona sizenzayo ngokwethu.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwe-intanethi, Ayibalulekanga into yokuba abantu aba-2, 3 okanye aba-4 banxibelelene nomzila wethu. Kodwa Ewe inye yabo banxibelelana nenethiwekhi, okanye ezininzi kubo, bazama khuphela iifayile ezinkulu, kwaye bayayenza rhoqo, ewe iya kuba nefuthe elibonakalayo kwisantya sonxibelelwano lwethu.
Kukho iinkqubo ezivelisa ngokungakhethiyo iikhowudi zephasiwedi kwinkampani nganye. Kwaye kunjalo kulula kwaye iyakhawuleza, ngenkqubo elungileyo, kunye ngaphandle kokufuna ulwazi olukhulu isayensi yekhompyuter, fumana Chaza isitshixo kwaye ungene ngokukhululekileyo kwi-router yakho. Ulinde ntoni ke? Guqula iphasiwedi ngoku kwaye ungavumeli mntu ukuba aqhagamshele ngaphandle kwemvume kwinethiwekhi yakho.
Ke unokwazi ukuba umntu othile ubile i-wifi yakho
Guqula ishaneli yeWi-Fi esiyisebenzisayo i-router yethu
Njengoko sikuxelele, Imeko esingqongileyo ikwachaphazela umgangatho womqondiso wethu. I Ukukhutshwa kwe-Wi-Fi engummelwane kuchaphazela eyethu ngendlela yokuphazamiseka. Kule inomdla ukwazi ngayo yintoni band umsebenzi umzila wethu, kwaye ungcolise amajelo kunye nokugcwala okuncinci.
Imizila yangoku ngokuzenzekelayo Skena amabhanti asetyenziswa kakhulu kwimeko apho ikhoyo. Ngale ndlela bayila elona bhendi libalaseleyo ukuze banikezele owona mqondiso ubalaseleyo. Okwangoku, oku akusoloko kusebenza ngokupheleleyo. Ngale nto kukho Izicelo ze-smartphone kunye / okanye iinkqubo zekhompyuter ezinokusinceda.
Le yile eyona isebenzayo kuwo onke amanyathelo. Kodwa ke, siphulukana nokuhamba kunye nethuba lokudityaniswa kuyo nayiphi na ikona yendlu. Ingxaki kukuba kuxhomekeke kwindawo esihlala kuyo, Ukugcwaliswa konxibelelwano lweWi-Fi kwindawo enye kubangela ukuba badibane kunye nokuphazamiseka okungapheliyo kuvela. Ukusikeka okungapheliyo, ukwehla okukhulu okanye ukuphazamiseka okuzayo kunye nokuhamba ziziphumo ezininzi zezi zinto ziphazamisayo.
Ukuba unxibelelwano oludingayo yendawo yokusebenza, nokuba kusekhaya okanye e-ofisini, Esona sisombululo sisiso ngoqhagamshelo olunentambo. Kule meko sithetha, ewe, malunga nokunxibelelana nekhompyuter ukuze usebenze. Kucacile ukuba akukho ngqiqweni ukuhamba kunye nethebhulethi okanye i-smartphone edityaniswe nentambo, kunye nobunzima obongezelelweyo oku kubandakanya.
Kodwa ukuba sifuna i I-100% izinzile, inxibelelwano olukhuselekileyo, kunye neziqinisekiso zokuba nesantya esiphezulu sekhontrakthi, intambo sisisombululo kuphela esiqinisekisa ezi meko zintathu. Kwabaninzi, ukunxibelelana nentambo imele inyathelo elibuyela umva kunxibelelwano, kwaye ngokuyinxenye kunjalo. Kodwa unanamhla, uqhagamshelo olunentambo isengcono.
Sebenzisa i-router endala
Olunye ukhetho olunokufumaneka kwabaninzi kukuba Sebenzisa umzila omdala. Kuqhelekile ukuba xa sitshintsha iinkampani, ngamanye amaxesha esizenza rhoqo kunokunqwenela, sibeka i-router esiza kuyeka ukuyisebenzisa kwidrowa. Y ngoqwalaselo olusisiseko sinokuyiphinda kabini imiqondiso yethu ukuyisebenzisa njengokuphindaphinda.
Kuya kufuneka buyisela useto lwasefektri, kwaye kuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza esiyisebenzisayo, iiWindows okanye iiMacOs, ukufikelela ngqo kwi menu umzila ngokwawo. Kuxhomekeke kwimodeli kunye negama lendlela esiyisebenzisayo, kodwa amanyathelo athathwayo ayafana.
Kufanele si qwalasela i-router yethu endala njengesixhobo sokungena se-wifi. Ngenxa yoku kufuneka khetha umqondiso esifuna ukuwuphinda. Siza kwenza ipaswedi yokufikelela esiya kuthi siyibandakanye kuzo zonke izixhobo zethu. Kwaye ngale ndlela Siza kuba neendawo ezimbini zokufikelela kwi-wifi ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyiphucula njani i-wifi signal ekhaya